Sheekh Shariif oo maalmaha soo socdo Muqdisho kaga dhawaaqi doonno musharaxnimadiisa doorasho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Shariif oo maalmaha soo socdo Muqdisho kaga dhawaaqi doonno musharaxnimadiisa doorasho
Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maalmaha soo socdo la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoona markaasi ku dhawaaqi doonno musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Sheekh Shariif oo dhowr jeer hore dib u dhac ku yimid safar uu doonayay inuu magaalada Muqdisho ku yimaado ayaa qorsheeynaya inuu maalmaha soo socdo yimaado, si uu halkaasi uga bilaabo ololihiisa doorasho ee xilka madaxtinimo.
Muddo 4 sanadood kahor ayay ahayd markii Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu isaga baxay dalka Soomaaliya, kadib markii looga guuleystay tartantii doorasho ee uu la galay madaxweynaha haatan xilka haaya Xasan Sheekh Maxamuud.
Sidoo kale, waxaa haatan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya laga dareemayaa diyaargarow aad u balaaran oo ay wadaan taageerayaasha Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaana maalmaha soo socdo la filayaa inuu soo gaaro magaalada.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sida la ogsoon yahay taageero badan ku leh gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya, waxayna dad badan aaminsan yihiin in ninkii xilka ugu danbeeyay (Xasan Sheekh) xaaladda dalka uga sii daray, taas oo Sheekh Shariif ku kaliftay inuu markale xilka isku soo sharaxo.
Ugu dambeyntii, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in hataan la xaliyay wal-walkii amni darro ee uu ka qabay imaanshiyaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, warar madax banaan ayaa sheegaya in kalsoonida uu haatan qabo Sheekh Shariif ee dhinaca amnigiisa ay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu dar-daaran xoogan u jeediyay ciidanka dalkiisa ee ku sugan magaalada Muqdisho ee ku howlgala magaca AMISOM, xilli uu ka qeyb galaayay shirka urur goboleedka IGAD ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntii, wuxuu madaxweyne Museveni ciidanka dalkiisa kula dar-daarmay inay suggaan amniga Sheekh Shariif Sheekh Axmed inta uu ololihiisa doorasho ka wado magaalada Muqdisho, taas oo keentay inuu Sheekh Shariif isku aamino inuu isku diyaariyo safarka Muqdisho.